UBilly Macklowe ngokusesikweni Izahlulo zeendlela noTata, iqala iNkampani eyiNkampani - Iphepha Lasekhaya
Eyona Iphepha Lasekhaya UBilly Macklowe ngokusesikweni Izahlulo zeendlela noTata, iqala iNkampani eyiNkampani
UBilly Macklowe ngokusesikweni Izahlulo zeendlela noTata, iqala iNkampani eyiNkampani
UMacklowe omncinci, owadumisa utata wakhe osokolayo kumaphepha e Ijenali yeWall Street kwi-2008, wabizwa njengosihlalo kunye ne-CEO yenkampani yeHarry, Macklowe Properties, ngoJuni waloo nyaka. Kodwa loo ntshukumo ngokucacileyo ayimnikanga inkululeko awayeyinqwenela.
Namhlanje, intatheli kaBilly eRubenstein ithumele ukukhutshwa okulandelayo.
UWILLIAM (BILLY) MACKLOWE UPHUMELELA NGOKUSESIKWENI
IQELA LAKHE; YENZA ISIBHENGEZO Siphumelele
UKUCHAPHAZELELA KWI-MADISON AVENUE KUNYE NE-610 BROADWAY
ENew York, NY… Umphuhlisi wezindlu nomtyali mali uWilliam S. (Billy) Macklowe usungule ngokusesikweni iphulo lakhe elitsha, iNkampani kaWilliam Macklowe (WMC).
Umnumzana Macklowe kunye neqela labasebenzi abalishumi elinambini abamjoyinayo kwinkampani yakhe yangaphambili, Macklowe Properties, baseke ikomkhulu le-WMC kuwo wonke umgangatho we-28th kwi-126 East 56th Street, apho baya kugxila ekuthengeni, ukubolekisa ngobuchule, ukuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba kunye nokufunyanwa kwepotifoliyo, ngaphakathi nangaphandle kweSixeko saseNew York. Ukongeza, i-WMC iya kuqhubeka nokulawula iipotifoliyo yayo kwaye izakulandela ukukhetha izabelo zolawulo lomntu wesithathu.
Kwisiqalo esihle kwishishini lakhe elitsha, uMnu.Macklowe ukwabhengeze ukuba uphumelele ukuxhasa ngokutsha iipropathi ezimbini- isakhiwo seofisi esinemigangatho engama-22 e-400 Madison
I-Avenue (ene-66.5 yezigidi zeedola ukuphinda axhase imali kwiNkampani ye-Inshurensi yoBomi kunye neMalkin Strategic Capital) kunye neofisi ephawulekayo / isakhiwo sokuthengisa kwi-610 Broadway eShoho (kunye ne- $ 43 yezigidi zokuqala zokubolekwa kwemali kwi-Eurohypo).
Sinovuyo malunga nesicwangciso seshishini lethu kunye neqonga elibanzi esiliphuhlisileyo, utshilo uMacklowe oneminyaka engama-42, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba senkampani. Isivumela ukuba sithathe amathuba kwisicwangciso-qhinga sotyalo-mali, siqhubeke nokusebenzisa amandla ethu kuzo zombini iofisi yemveli kunye neendawo zokuhlala kunye nentengiselwano entsonkothileyo apho amava wethu abanzi nahlukileyo aya kongeza ixabiso elibalulekileyo.
Izakhiwo zethu azizukuqhutywa kwaye ziqhutyelwe kwisiko laseMacklowe, ekudala lisaziwa njengomzekelo wemigangatho yolawulo oluphezulu kushishino lwethu, kodwa sikwajonge ukujoyina amahlakani amaziko nawentsebenziswano ekufumaneni izinto ezintsha nakumathuba ophuhliso. Apho iindlela zokuyila, amava okwakha abanzi kunye neendlela ezahlukeneyo zeqonga lethu zinokunceda ukufezekisa amandla eprojekthi.
Isiseko se-WMC seengcali zearhente yamaxesha athile zibandakanya iGosa eliyiNtloko eliSebenzayo uJason Grebin, uMlawuli oPhetheyo wezeMali kunye nokuFunyanwa kukaNoah Leonard, uSekela Mongameli oLawulayo weeNkonzo zoLawulo uJim Migliore kunye noSekela Mongameli oPhezulu woQeshiso loRhwebo uKen Dillon.
Uhlonitshwe ngenxa yobungcali bepropathi, ingakumbi kuphuhliso, ukuthengwa, ukuqeshisa kunye nezemali, uMnu Macklowe omncinci wajoyina utata wakhe, uHarry, eMacklowe Properties ngo-1993. Wathatha ubongameli baloo nkampani ngo-2002 kwaye wathatha isikhundla njengoSihlalo & U-CEO ngo-2008. Uye washiya iMacklowe Properties ngoJulayi ka-2010 eyokumilisela iWMC.
UMlawuli we-'John Wick 4 'usacacisa ukuba zeziphi ezinye iiMovie eziPhezulu
Yintoni Esinokuyifunda Kwindawo Egqithileyo YaseMelika ethi ‘Loo Nto Uyenzayo!’
Uya phi uChristopher Nolan emva kweMfazwe yakhe noWarner?
Kwi 'Camgirl,' u-Isa Mazzei Uthetha ngokuphandle malunga neeStereotypes zeSexual Work
UNelson Rockefeller, uJr.
I-delta 8 ivenkile kufutshane nam
kuyakwenzeka ntoni ukuba intaba iyaphumelela kunyulo
UDwayne johnson ubhatala ngemovie nganye
Iqela likaharry's lokucheba idola ngo-2019
Iibhanki zembewu ye-cannabis ezithunyelwa e-usa